IApartment ENTSHA yePanorama kwiziko leSixeko
Iflethi entsha enembonakalo entle yesixeko. Ukuba ufuna ukunqanda ingxolo yombindi wesixeko esixakekileyo kodwa uhlale ukufutshane nesenzo ke le yeyona ndawo ikufaneleyo. Ifakwe kwindawo ezolileyo kodwa kuhambo olufutshane kakhulu ukuya kwiindawo eziphambili zabakhenkethi, iindawo zokuthenga, iSkenderija complex/iholo yekonsathi, iCasino yaseColoseum, iibhari/iindawo zokutyela kunye neeresityu. Indawo yokupaka yasimahla phambi kwesakhiwo ngokufika kuqala. Iindawo zokumisa iibhasi kunye netram ziphakathi kwemizuzu emi-5 umgama wokuhamba ukusuka kwindlu.
Le ndlu yanamhlanje kwaye ithokomele ibandakanya i-terrace yabucala enombono omkhulu wesixeko. Ihlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-4, kunye nebhedi yokumkanikazi enye kwigumbi lokulala elivaliweyo, kunye nebhedi etofayo yesofa kwigumbi lokuhlala. Uya kuba nokufikelela kuzo zonke izinto eziluncedo kubandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. I-AC, i-wifi kunye ne-TV yentambo ekhoyo. Indawo yokupaka yasimahla phambi kwesakhiwo ngokufika kuqala.
Wamkelekile kwenye yezona ndawo zinomtsalane eSarajevo. Yonke into oya kuyidinga ngokuhlala okumnandi kunye namava asekhaya akumgama wokuhamba, nokuba undwendwela idolophu endala, iimyuziyam, iindawo zokutyela ezidumileyo, iindawo zokuthenga, okanye ukonwabela ukuhambahamba eVilsonovo setaliste. Ungalibazisi ukusicela iingcebiso njengoko sonwabile ukwabelana ngamakhubalo esixeko sethu.
Ungalibazisi ukunxibelelana nawe ukuba unayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo malunga nendawo yethu, okanye nantoni na eyenye.